Mutemo utori fair zvewo uyu . NGO' s must distance themselves from politics.
Haa MDC leaders pamari havo haaa they just think of themselves Chero uka batsira campaign zvemhando ipi MDC HAUWANI CHINHU .. haa those people surrender.
Mr nice Chero vanhu vaye vapihwa masaga emarii haaa hapana hapana.
Kubva nguva ya Morgan chaiyo, mari yainge isingasvike kuvanhu ipapo havajaidzi makudo neanokamhina😂😂
Anongopiwa Mari CHAMISA through his Master,Visa and Credit Cards.
Anongondoipiwa Kuma Banks eku ZAMBIA, SOUTH AFRICA NE BOTSWANA,otobva ikoko nesaga recash yema $USD nema POUNDS.
saka hatingamugoni,asi zvirikungotishoresa chete nedzimwe nyika kuti tavakutongera pachi ONE PARTY STATE
Cash haambofi akaishaiwa. Kwatiri kupedza nguva necash ndeuko kwa MWONZORA. Hakuna dhiri uko.
Haiwawo kushaya zvekuiita uko, madii mambo sunga Chief Charumbira aka supporter Zanu Pf munhu wese achinzwa,yet hazvitenderwe Zimbabwe ticha muka rinhiko nxaaa
Mwonzora is an idiot
The bill is of good cause..... If an organization is opened it should operate on it's mandate..... Kwete kuti tinozovaona vavekuma rally
The laws are natural , I bet if Mr Chamisa get into power he will not abolish such a law.He will keep and apply it very well kkkk
True, anenge achiiteyi pa Rally isiri yebato rake? Chimbwasungata😁
Iwe unenge uchiitei parally pacho??